Governemanta vaovao no mahasarika ny saina sy maso - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Hoy ny haino aman-jery
Governemanta vaovao no mahasarika ny saina sy maso
Rasoanjanahary il y a 3 mois
Tsongom-baovao nanamarika Tsongom-baovao nanamarika ny herinandro faharoa amin’ny volana aogositra : Fahataperan’ny fe-potoam-piasan’ireo minisitra, Fanendrena ireo mpikambana mandrafitra ny governemanta vaovao, Vidin-javatra sy kabarin’ny filoham-pirenena, Rodoben’ny mpanohitra feno roa taona, Fitsaboana nenti-paharazana sy dokam-barotra, Fanafody nanjavona tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina, Fametrahana ny faritra faha 23, Fanomezana mari-pankasitrahana manamboninahitra zandary, Fanavaozana ny lalànan’ny fananan-tany, « Fonds souverain » nankatoavin’ny depiote vitsivitsy, Vakisiny fanefitry ny « covid-19 » sy fivoaran’ny antotanisa, Fahatapahan’ny herinaratra.
Fahataperan’ny fe-potoam-piasan’ireo minisitra
Tapitra tamin’ny alarobia 11 aogositra 2021 ny fe-potoam-piasan’ireo minisitra rehetra ao amin’ny governemanta, araka ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny praiminisitra Ntsay Christian. Ka ny fampandehanan-draharaha andavanandro na « expédition des affaires courantes » no ataon’izy ireo mandra-panendry ireo minisitra handrafitra ny governemanta.
Fanendrena ireo mpikambana mandrafitra ny governemanta vaovao
Ny alahady hariva 15 aogositra 2021 no nanambarana tamim-pomba ofisialy teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ireo mpikambana mandrafitra ny governemanta vaovao, araka ny didim-panjakana laharana 2021-822. Nalefa mivantana tamin’ny haino aman-jerim-panjakana TVM sy RNM ary ny tsy miankina. Ahitana mpikambana miisa 32 ka ny 22 no vaovao, 9 no efa teo ary iray novan-toerana. Anisan’ny mampiavaka azy ity ny fisiana minisitra lefitra 3 sy sekreteram-panjakana 2 ary mpikambana vazaha frantsay iray, mitantana ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny. Nitombo isa ihany koa raha nisy fotoana nampihenana izany mba ho fitsitsiana. Nambaran’ny filoham-pirenena fa fanatanterahana « Contrat-programme » sy « obligation de résultats » no fepetra arahin’ireo mpikambana ary manao sonia izany izy ireo. Taorian’io fotoana io dia nitarika filan-kevitry ny minisitra ny filoham-pirenena, ary lasa any Malawi avy eo, hanatrika ny fivorian’ny filoham-panjakana sy mpitondra anivon’ny Sadc (16-17 aogositra).
Vidin-javatra sy kabarin’ny filoham-pirenena
Andro telo taorian’ny nilazan’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, fa tsy maintsy vahana ao anatin’ny telo andro ny vidin-javatra midangana, dia tsy nahitam-piovana izany amin’ny ankapobeny raha ny tao an-drenivohitra, ary hatramin’ny faran’ny herinandro aza. Ny alahady 8 aogositra 2021 izy no nilaza fa hanome baiko ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny hifehezana ny vidin’entina araka ny tokony ho izy.
Rodoben’ny mpanohitra feno roa taona
Nanamarika ny taona faharoa niorenany tamin’ny talata 10 aogositra 2021 ny RMDM na ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara. Tao amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka no nanamarihana izany. Nahitana ireo mpikambana isan-tokony toy ny avy amin’ny antoko Tim tarihin’ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc.
Fitsaboana nenti-paharazana sy dokam-barotra
Manoloana ny firoboroboan’ny dokam-barotra amin’ny fitsaboana nenti-paharazana sy fanafody, dia nanao fampatsiahivana ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny Profesora Rakotovao Hanitrala Jean Louis, fa misy lalàna ny fomba fitsaboana eto Madagasikara. Fampahatsiahivana nataony tamin’ny 10 aogositra teo. Mihoa-pefy, hoy izy, ny fanaovana dokam-barotra amin’ny sehatry ny fahasalamana ka nanaovany antso ny mba hanajana ny ara-dalàna.
Fanafody nanjavona tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina
Araka ny fampandrenesana tamin’ny haino aman-jery sy tambajotra sosialy tamin’iny herinandro iny, nataon’ny orinasa mpamongady fanadody OPHAM (Office Pharmaceutique Malgache), dia nisy nangalatra sy nanjavona tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina, ny 5 aogositra lasa teo, ny kaontenera iray nisy fanafody 1360 baoritra, mitondra ny marika DESKA. Ahitana amoxicilline gélules, ampicilline injectable, ibuprofen comprimés, ary peniciline G injectable.
Notontosaina tamin’ny 11 aogositra 2021 ny sonia nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny lalàna mametraka amin'ny fomba ofisialy ny Faritra Vatovavy ho faritra faha 23 eto Madagasikara. Ny Faritra Vatovavy izany dia ahitana ny distrikan'i Mananjary, ny distrikan'i Nosy Varika ary ny distrikan'Ifanadiana. Ny distrikan'i Manakara, Vohipeno ary Ikongo kosa no mandrafitra ny Faritra Fitovinany. Teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha no nanaovana ny lanonana momba izany, ary nampiakarana ireo solontenan’ny Ampanjaka sy Olobe avy ao amin'ny Faritra Vatovavy sy Fitovinany.
Fanomezana mari-pankasitrahana manamboninahitra zandary
Nasondrotry ny Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sady filoha faratampon'ny Foloalindahy ho amin'ny laharam-boninahitra "Grand croix de deuxième classe de l'Ordre national malagasy", ny Jeneraly Richard Ravalomanana. Izy moa dia sekreteram-panjakana eo anivon'ny Ministeran'ny fiarovam-pirenena miadidy ny Zandarimariam-pirenena, niasa 40 taona sy efa-bolana teo anivon'ny Zandarimariam-pirenena. Teny Ivato no nanaovana ny lanonana nanatanterahana izany tamin’ny 12 aogositra 2021. Ankoatra ny an’ity jeneraly ity, dia teo ihany koa ny fanomezana medaly sy fampiakarana laharam-boninahitra manokana ho an’ireo manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra eo anivon’ny zandarimariam-pirenena.
Fanavaozana ny lalànan’ny fananan-tany
Manaitra ny fitondram-panjakana ny « Collectif tany », vondrona miaro ny tany malagasy, momba ny fanavaozana ny lalàna 2006-31 momba ny fananan-tany an’olon-tsotra tsy vita titra sy ny fampiatoana ny fanomezana karatany. Voalazan’ny antso fanairana nataony tamin’ny 10 aogositra fa misy fihemorana amin’ny fizakan-tany izany fanavaozana ny lalàna izany ary fanamorana ny hahazoan’ny vahiny tany eto Madagasikara. Tondroiny manokana amin’ny fanairana ataony ny filohan’ny Repoblika sy ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenena mba tsy hanao sonia sy handany izany lalàna izany. Tsiahivin’ny « Collectif tany » fa depiote 9 amin’ny 18 no nandany ilay lalàna 2021-016 ny alin’ny 30 jona 2021 tamin’ny 10 ora sy sasany, miisa 151 anefa ireo depiote.
« Fonds souverain » nankatoavin’ny depiote vitsivitsy
Nankatoavin’ireo depiote nivory tamin’ny alalan’ny « visioconférence » tamin’ny 13 aogositra 2021 ny lalàna fametrahana ny atao hoe « fonds souverain ». Tahiry manokana an’ny fanjakana malagasy hiatrehana ny fampandrosoana ny firenena tsy miankin-doha amin’ny famatsiambola ivelany. Depiote miisa 26 no tonga tamin’ny fandaniana izany lalàna izany ary 23 amin’izy ireo no nankato azy, 3 no nitsipaka ka anisan’izany ny depiote Roland Ratsiraka. Nambaran’ity nitsipaka fa mety ho fanadiovam-bola ny fametrahana io tahiry io.
Vakisiny fanefitry ny « Covid-19 » sy fivoaran’ny antotanisa
Tonga tamin’ny 15 aogositra 2021 teny amin’ny seranan’Ivato ny vakisiny « astrazeneca » miisa 200 000 avy amin’ny firenena Frantsay ho an'i Madagasikara, ao anatin’ny programa « Covax ». Ny Unicef no miantsoroka ny fanaterana ny vakisiny eto amintsika. Ireo izany no fatra faharoa taorian’ilay voalohany natao vakisiny tamin’ny « Covishield ». Mitovy ny kasinga anatin’ny Astrazeneca sy ny Covishield, araka ny fanamarihana avy amin’ny Minisiteran’ny Fahasalamana. Aorian’ny fanatanterahana ny tsindrona faharoa amin’ny Astrazeneca, ho an’izay nanao tamin’ny voalohany, dia aorian’izany ny fanaovana ny vakisiny « Johnson and Johnson » ho an’izay hanao izany. Eo amin’ny fivoaran’ny antotanisa ofisialy momba ny « Covid-19 » eto amintsika dia toy izao izany ny 23 marsa 2020 hatramin’ny 13 aogositra 2021 : miisa 42 811 ny fitambaran’ny tranga ka ny 42 505 no sitrana, miisa 952 ny fitambaran’ny lavo, ary 233 113 no fitambaran’ny fitiliana natao. Tsikaritra ho mihena hatrany ny tranga amin’ny fitiliana atao, miisa 9 izany amin’ny fitiliana 306 natao tamin’ny 13 aogositra, 4 no sitrana ary 1 no lavo.
Tsikaritry ny mpanjifa tao ho ao fa misy fahatapatapahana matetika ny herinaratra, toy ny tamin’ny alahady 15 aogositra, tamin’ny faritra sasany tao Antananarivo. Tsy voafaritra ao anatin’ilay fampiomanana mahazatra ambara amin’ny fampitam-baovao samihafa. Mbola tsy voavaha io olan’ny herinaratra io hatreto, amin’ny faritra maro manerana ny Nosy.
Télévision numérique : StarTimes lance les nouveautés pour la période de Noël - il y a 13 jours
COP26 : Orange Madagascar marque l’évènement avec les enfants codeurs #SuperCodeurs ﻿ - il y a 20 jours